तालिबान सरकार गठनको तयारीमा, कस्तो बन्ला त सरकार ? « Image Khabar
तालिबान सरकार गठनको तयारीमा, कस्तो बन्ला त सरकार ?
१ भाद्र २०७८, मंगलवार ०७:०१
एजेन्सी । अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएको तालीवानीहरुले सरकार गठनको तयारी गरेका छन् । २० बर्षको लामो संघर्षपछी सत्ता कब्जा गरेको तालीवानीले आफुहरुले युद्ध जितेको घोषणा गर्दै सरकार गठनका तयारी थालेका हुन् ।
उनीहरुले अफगानिस्तानमा जारी तनाव अन्त्य गर्दै सरकार गठन गरी देश र जनताको भलाईका लागी काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । अफगानिस्तान आफनो कब्जामा गएपछी चीन, पाकिस्तान र रुसले मान्यता दिइसकेको दाबी गर्दै तालीवानले सरकार गठनपछी अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हुने समेत घोषणा गरेका छन् ।
हाललाई तालीवानका प्रभावशाली नेताहरु मुल्ला अब्दुला बरादर र हिब्तुल्लाह अखुन्दजादाले सरकार सम्हाल्ने तालीवानीले जनाएको छ । उनीहरुले आफनो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा कुन पनि नागरिकले डराउनु पर्ने स्थिती आउन नदिने बचन पनि दिएका छन् ।
जब दुई शिशुलाई भुलवस् कोरोनाविरुद्धको खोप दिइयो…
नेतृ सुचीलाई ४ वर्ष जेल